Soo dejisan Internet Download Manager 6.29.2 – Vessoft
Agabka dhamaystiran ciyaarta horumarinta hababka kala duwan qalliinka. Software waxay leedahay dhowr ah saamaynta garaafyada iyo dhawaaq si loo gaaro design ugu tayada ciyaar.
utility antivirus ayaa si takhalusi ku spyware iyo adware. software The waa awoodaa in la ogaado noocyada kala duwan ee Trojans, Gooryaanka iyo daaqadda.
Software inay dalka baadhaan oo loo casriyeeyo qoraalkii duugowday ee darawallada. Sidoo kale software ka taageertaa updates wadaha qalabka dibadda ah.
Ciyaarta ayaa ku caan ah si uu u dhiso dhismayaasha kala duwan ee adduunka abuuray blocks ah. Ciyaaryahanka ayaa heli ah u hababka kala duwan ee ciyaarta iyo beddelka badan si ay u baahiso fursadaha.